[10 / 10 / 2019] Karamürselရှိ Mobile Office Caravan	41 Kocaeli
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliKocaeli Kuruçeşmeဓါတ်ရထားလိုင်းရထားလမ်းကွန်ကရစ်ပြိုကွဲနေကြသည်
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့အနှံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်အသက်ရှူနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကဏ္ဍတွင်တဲ့ Metropolitan အဖွဲ့များAkçarayဓါတ်ရထားလိုင်းအလုပ်လုပ်ဆက်လက်အနိုင်ရရှိKuruçeşme၏နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ သိပ္ပံအလုပ်လုပ်အသင်းများကိုလမ်းရထားအကျင့်ကိုကျင့်၏ဦးစီးဌာန၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ညှနျကွားထဲမှာကွန်ကရစ်ရထားလမ်းလောင်း။
Ray အပိုင်း TWO ကွန်ကရစ်စွန့်ပစ်နေကြသည်
ကိုတင်သောနှင့် concreting အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုလမ်းကြောင်းပြုAkçaray Plajyolu ၏ပညာရေးကျောင်းပရဝုဏ်၏လုပျငနျးကိုဆကျလကျတံ့သောဒုတိယအပိုင်းသည်။ အသင်းများကိုပြင်းထန်စွာ, ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအောက်မှာ 600 မီတာရထားလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ဒုတိယအပိုင်း 600 တဦးတည်းမီတာဘူတာရုံ built လိမ့်မည်။ သံလမ်းအသုံးပြုကြသည် grooved 140 600 အကြောင်းကိုဒုတိယအဘို့ကိုလမ်းရထားလိုင်းကိုတထောင်ကုဗကွန်ကရစ်မီတာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတန်ချိန်။
NEW YANYOL ဖန်တီးထားကြသည်
အဆိုပါလမ်းဆုံမှာအဟောင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအချိန်တိုအတွင်းတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းလမ်းရထားကားသစ်ကိုဉမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြတ်သန်းနိုင်, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Mevlana လျှော်ကြ၏။ Maulana လမ်းဆုံအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီအလုပ်လုပ်ကိုင်နည်းလမ်းအသစ်များကိုနှစ်ဖက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
Sekapark - KURUÇEŞMEအပိုင်း DONE အလုပ်မှာ၏ TWO Line
Sekapark - ထို Plajyolu စနစ်ကလိုင်းအကြားတည်ရှိသောအရှည်တထောင်2140 အကြောင်းကိုမီတာအတွက်ဓါတ်ရထားရထားလမ်း, စုစုပေါင်း4စုစုပေါင်းဘူတာရုံများတွင်ပါရှိသည်။ အဆိုပါ 8 640 အတွက်တထောင်မီတာမျဉ်းတစ်လျှောက်စုစုပေါင်းအရှည်နှင့်မြှောင်းပုံရထားလမ်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ 500 တန်ချိန်ဆောင်သွားကြ၏။ ရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းနှင့်ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံလိုင်းအသစ်များလိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး, သစ်ကိုဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအောင်, အရှည်လမ်းဘက် 650 မီတာအောင်, အလမ်းရထားလိုင်းကိုလျှောက်လမ်းဘေးစင်္ကြံအောင်ဘူတာအဆောက်အဦများ, လိုင်း-path ကိုအလင်းရောင်နှင့်အသွားအလာ signal အကျင့်ကိုကျင့်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ Sekapark - Kuruçeşme Sekapark ဓါတ်ရထားလိုင်း - ပထမအဘို့ကိုပညာရေးကျောင်းပရဝုဏ်နိုင်ငံသားများ၏ဝန်ဆောင်မှုမတိုင်မီပြီးစီးခဲ့ပါသည်တို့အကြား။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းတင်သောအလုပ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌ပြစ်မှားမိသည်။
Kocaeli4။ နှောင်းပိုင်းအဆင့်Kuruçeşmeမှဝေဟင်ဓါတ်ရထားစီမံကိန်း 09 / 04 / 2018 အဆိုပါ AKP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Hasan Ayaz Izmit ယနေ့ခရိုင်အတွင်းစာနယ်ဇင်းKuruçeşmeအဆောက်အဦးများ၏အစည်းအဝေးအထိလမ်းရထားလိုင်းကို၏ extension ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ အဆိုပါ AKP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Hasan Ayaz Izmit ယနေ့ခရိုင်အတွင်းစာနယ်ဇင်းKuruçeşmeအဆောက်အဦးများ၏အစည်းအဝေးအထိလမ်းရထားလိုင်းကို၏ extension ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ Ayaz, 1 ။ အဆိုပါလမ်းရထားအသွားအလာမြို့ပြကျော်မှတဆင့် ", အ xnumx.etab ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလမ်းရထားစီမံကိန်းအားလေထုလွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ထိုအ2။ ခံစင်မြင့်ဘို့လေ့လာခဲ့သည်။3။ Etap Kuruçeşmeဆင်ခြေဖုံးလေကြောင်းလွန်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုမှာတော့ကျနော်တို့ရထားလမ်း၏အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အခွင့် Izmit ကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ဥပမာ။ က Short ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများ Izmit အသွားအလာအတွက်အနားယူရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြှနျုပျတို့ပွုသူတို့ကပဲဘယ်လို။ သောကြောင့် ...
ကျောက်ခဲတို့ကိုကတ္တရာစွန့်ပစ်ထွက်ဝမ်းခွဲ 19 / 11 / 2014 ကျောက်များထွက်သည်ဝမ်းခွဲကတ္တရာစွန့်ပစ်: ကတ္တရာအလုပ်အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖို့ Aliaga ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။ ကြိုဆိုကတ္တရာအလုပ်ကဤလေ့လာမှုများအဘို့သတ်မှတ်ထားရာအရပ်ကနေထိုသူအချို့တို့သည်လမ်းခင်းလမ်းများ၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအများကြီးပိုလိုအပျသောလမ်းများနှင့်ရပ်ကွက်ရှိပါတယ်ပြောသည်ပြီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အရေအတွက်က Aliaga လူမှုရေးမှာကဲ့သို့ကတ္တရာမိုးရေဆန့်ကျင်မလုံလောက်ပါလိမ့်မည်, Aliağalı၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ် ဒါကြောင့်ထိုရက်သတ္တပတ်၏မီဒီယာအတွက်ဆွေးနွေးမှုများ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြုAliağalıကတ္တရာအလုပ်အချို့ကိုကြိုဆို, အရပ်အချို့ကိုလည်းဒီလေ့လာမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့ရပ်ကွက်များနှင့်လမ်းများပိုပြီးလိုအပ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါတည်ဆောက်မှု ...
ဓါတ်ရထားလိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းKuruçeşmeမှလာမယ့် 12 / 03 / 2019 အဆိုပါဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆိုပါ Plajyolu လမ်းဆုံကနေအကူးအပြောင်းတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဘို့ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Kuruçeşme Mevlana တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်လမ်းရထားလိုင်းကိုတင်ဒါဖွင့်လှစ်။ နု၏ ​​4 သန်းတန်ဖိုးဖြတ်တန်ဖိုးကိုတထောင်ကုမ္ပဏီများမှလေလံတင်သွင်းခဲ့ကြ 5026ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Kuruçeşmeတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တိုးချဲ့Akçaray Tarmvat င်း၏လိုင်းချဲ့ထွင်အဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူမြို့ပေးလိမ့်မည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာလည်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာရုံစိုက်ချေKuruçeşmeပင်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းများအတွက်တင်ဒါခဲ့ Plajyolu Mevlana လမ်းဆုံဉမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲကနေအကူးအပြောင်းတွင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးလေလံအတူနူးညံ့3402 တထောင်သန်း Egecan အတွက်နိမ့်ဆုံးလေလံလောင်စာဆီမှ လာ. EGEC ကနေလောင်စာကမ်းလှမ်းချက်နိမ့်ဆုံး ...
နယူးဓါတ်ရထားလိုင်းအတွက်Kuruçeşmeဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းစတင် 21 / 07 / 2019 Izmit Mevlana ဒေသတွင်းရောက်ရှိဖို့ Plajyolu အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုလမ်းဆုံကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နှစ်သိမ့်န်ဆောင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ရှူရန်၎င်း၏မြို့-ကျယ်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ, Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်သစ်တစ်ခုဉမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကဏ္ဍတွင်အသင်းများကိုအနိုင်ရရှိရန်Akçarayနိုင်ငံသားများပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုဓါတ်ရထားလိုင်း၏Kuruçeşmeတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, လမ်းရထားလိုင်းကိုအသစ်တစ်ခု culvert ၏ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ Sekapark - Izmit: D - 100 Mevlana အဝေးပြေးသစ်ကိုဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိပုံဖမ်းတွန်းလှည်းကားများဖြတ်သန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏လမ်းဆုံကိုအောက်တွင်ဆောက်လုပ်ထားပါလိမ့်မည် Plajyolu ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ပညာရေးကျောင်းပရဝုဏ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းသစ်တည်ဆောက်နေ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kuruçeşmeဓါတ်ရထားလိုင်း Mevlana Interchange ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး 14 / 02 / 2019 Kuruçeşmeဓါတ်ရထားလိုင်း Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ Mevlana Interchange ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေး - ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်KURUÇEŞME Tram LINE MEVLANA Junction ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတည်ဆောက်နေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆောကျမှုထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 46516 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အဆိုပါအရာရှိ '' ကလပ်ဟောငျး Sekar အဘိဓါန်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံİzmit / Kocaeli ခဆန့်ကျင် D-100 လမ်းကျော်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2623240510 - 2623172654 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ihale@kocaeli.bel ။ ဃ en) ကိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းမြင်နိုင်ပါသည် ...
အဆိုပါယာဉ်ညီလာခံဖို့ Tarhan Kuruçeşmeခရီးသွားလက်မှတ်ရထားဘူတာ
Kuruçeşmeရထားဘူတာ Mir နောက်တဖန်စတင်ပါလိမ့်မည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (172) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)